Fayyaa Dubartootaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 5:425:42
Dubartoonni dahuu hin dandeenye hayyama isaanii malee doktara isaaniitiin fedhii isaanii male ulfeeffamanii, daa'imman dhalataniif beenyaan dolaara miliyoona 13 dhiyaateef.
...tti maxxanfame 4:34 30 Adooleessa 20214:34 30 Adooleessa 2021
...tti maxxanfame 6:20 18 Adooleessa 20216:20 18 Adooleessa 2021
Waa'ee fayyaa wal-hormaataa dubartootaa haasa'uun maaf 'saalfachiisaa'?
Dhimma wal'aansa fayyaa dubartoota ilaalchisee ifatti haasa'uun akka dhimma safeeffatameetti hafuunsaa miidhaa qabaachu dubbatu waa'ee fayyaa dubartootaa irratti duula kan jiran.
...tti maxxanfame 4:51 15 Adooleessa 20214:51 15 Adooleessa 2021
'Lammiileen Indiyaa waa’ee saal-qunnamtii hin haasa’an - kanaaf ani nan gargaara'
Manneen barnootaa Indiyaa hedduu barnoota saal qunnamtii hin barsiisani, kanaaf maatiin ijoollee isaanii wa’ee wal qunnamtii saalaa fi hariiroo jaalalaa barsiisuun irra jiraata. Garuu yeroo hedduu maatiin akkamiin akka barsiisan hin beekani jechuun leenjistuun wal qunnamtii saalaa Pallavi Barniwaal BBCtti himteetti.
...tti maxxanfame 12:01 23 Caamsaa 202112:01 23 Caamsaa 2021
Suurri intala mootii Dubaay manatti hidhamtee jirtu mul'achuun ijoo dubbii ta'e
Gara dhuma torban kanaa miseensa maatii mootii kan taate Intalli Mootii Dubaay Laatiifaan suurri ishee Inistaagiraama irratti argamuun isaa ijoo dubbii ta'eera. Haalli Intalli Mootii Dubaay Latiifaan irra jirtu kun yeroo dheeraatiif ijoo dubbii ta'ee tureera.
...tti maxxanfame 8:45 23 Caamsaa 20218:45 23 Caamsaa 2021
''Fistulaan abaarsa miti''
Kaleessa Roobii guyyaan dhibee Fistullaa ''Obstetric Fistula'' dhaabuutu sadarkaa idil addunyaatti kabajame oole.
...tti maxxanfame 7:09 23 Caamsaa 20217:09 23 Caamsaa 2021
Leedii Gaagaa yeroo gudeedamuun ulfooftetti 'miidhaan sammuu narra gahee ture' jette
Addunyaarratti muuziqaatiin gurra guddaa kan qabdu Leedii Gaagaa yeroo dirqamaan gudeedamtee ulfooftetti miidhaan sammuu hamaan akka ishee mudatee ture himte.
...tti maxxanfame 9:54 20 Caamsaa 20219:54 20 Caamsaa 2021
Dubartoota wal'aansa harma guddifachuun booda dhukkubsataniif beenyaan murtaa'e
Manni murtii Firaans dubartoonni 2500 wal’aansa harma guddifachuuf argatan dhaabbata PIP gowwomfaman beenyaa akka argatan murtesseefi.
...tti maxxanfame 3:59 17 Caamsaa 20213:59 17 Caamsaa 2021
Dubartoonni baatii sagaliif garaatti baatanii erga dahanii booda qaama isaanii irratti jijjiramni yoo dhufu mul'ata. Akkasumas dubartoota tokko takkoo irratti ammoo jijjiramni amalaa akka mul'atu dhagahama. Saababiinsaa maali? Deessuu haala sana keessa dabarte dubbifneera.
...tti maxxanfame 5:29 15 Caamsaa 20215:29 15 Caamsaa 2021
Talaalliin Covid-19 marsaa laguu dubartootaarratti dhiibbaa akkamii qaba?
Wayita talaalii Covid fudhachuuf beellama qabattan miidhaa talaallichaan walqabatee dhufuu malu(side effects) ilaalchisee akeekkachiisi ni kennama. Fakkeenyaaf ho'a qaamaa, mataa bowwuu fi dadhabbiin irree(buusaawwan harkaa) irratti mul'atan isaan muraasa. Yeroon marsaa laguu dubartii jijjiiramuun garuu as keessatti hin tarroofne.
Page 1 Keessaa 16